Michael P. Thijs H. Jos B. ny tranga rehetra momba ny famonoana ny media dia mitarika amin'ny fampidirana haingana ny lalàna henjana izay mahakasika ny tsirairay: Martin Vrijland
Omaly dia nahita maso ny haino aman-jery momba ny raharaha Anne Faber isika, izay "niteny ny rain'i Anne". Raha ny tena marina, adihevitra iray no nahazoana ny fangorahana noho ny famongorana zo maro araka izay azo atao avy amin'ny mpamono toy izany tahaka an'i Michael P. Ny "rain'i Anne" dia tezitra mafy ka tsy mieritreritra raha toa i Michael P. nanao famonoan-tena.
Nametraka ny lohateny hoe "rain'i Anne Faber" aho amin'ny teny fanamarihana, satria raha misy ifandraisany amin'ny PsyOp (asa ara-psikolojika) izay nanesorana ny fisian'i Anne amin'ny alàlan'ny teknikam-panao lalina, dia tsy misy i Faber Faber Mpanakanto ray (toy ny reny, dadatoa, namana, sns.). Tsy azontsika lazaina amin'ny marina mihitsy amin'ny 100% raha toa ny kabariny any an-pitsaràna dia teny fanao am-pahamarinana, na ve isika mijery ny famokarana sy ny lalom-panaovan'i ANP John de Mol TV.
Ny toetra mampiavaka ny teknolojia lalina dia ny ahafahanao manamboatra olona iray avy amin'ny rafitra rindrambaiko AI (artificial intelligent). Afaka mametraka tantara iray manontolo ianao, anisan'izany ireo sary sy lahatsary. Efa tsotra izao ny rindram-baiko androany fa misy apps ara-barotra eo amin'ny tsena izay mampiasa ampahany teknolojia toy izany amin'ny smartphone apps.
Azonao atao, ohatra, ny resadresaka miaraka amin'ny mpilalao sarimihetsika ary mametaka ny feo sy ny endrik'ilay olona hafa (na ny lalina lalina) ao amin'ny streaming video mivantana. Tsy misy olona hahita ny fahasamihafana. Afaka manao toy izany amin'ny profil media sosialy sy ny tambajotran'ny namana. Namorona profiles, mameno ny lisitry ny namana, valiny namana. sary sy horonan-tsary, azonao ampiasaina amin'ny ny tafika troll izay manara-maso ny fifanakalozan-kevitra amin'ny media sosialy. Ireo no "vahoaka" hitantsika amin'ny resadresaka ao amin'ny Facebook sy ny forums. Ireo olona izay milaza fa fantany fa niharam-boina na nahalala olona nahafantatra tsara ilay olona na efa tany am-pianarana; etcetera. Izany no tafika troll izay tokony hanara-maso ny PsyOps online amin'ny resadresaka.
Ao anatin'ireo tranga famonoan'ny haino aman-jery ankehitriny, hitantsika hatrany am-piandohana fa natao hampihira ny vahoaka amin'ny fomba toy izany izy ireo ka manaiky lalàna vaovao izay eken'izy ireo amin'ny ankapobeny. in ity lahatsoratra ity Manazava aho fa amin'ny an-tsipiriany (tafiditra ao anatin'izany ny fanazavana momba ny fonosana).
Ao anatin'izany toe-javatra rehetra izany i Anne Faber, Nicky Verstappen, Michael Panhuis, Thijs H., Jos Brech (na ny anarana rehetra nosoratany tao amin'ny fahatsiarovanao), dia hitantsika hatrany fa mitondra mankany amin'ny lalàna vaovao izay tsy misy olona raha tsy misy ireny tranga ireny ny fiantraikany lehibe. Ao amin'io lahatsoratra voalaza io (tsindrio ny rohy) dia hazavako ny fomba ambaran'ny PsyOp ny farafaharatsiny Olana, fihetsika, vahaolana dia nampiharina tamin'ny lalàna vaovao. Asehoko fa tsotra tsotra ianao afaka mametraka PsyOp miaraka amin'ny fitaovana ara-teknika ankehitriny. Mamorona, toy ny olana iray (izay tranga iray misy fiantraikany goavana ny fiantraikany goavana), ianao mamorona ny olona amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny haino aman-jery amin'ny fihetseham-pony, mba hahafahan'izy ireo miditra amin'ny dingana farany; ireo izay ifantohan'izy ireo ny lalàna henjana izay azon'izy ireo atao.
Ny trangan'i Thijs H. dia tsy maintsy mitarika amin'ny fanafoanana ny tsiambaratelon'ny sehatra ao amin'ny toeram-piasan'ny olona ho "fitsaboana ara-pahasalamana", satria i Thijs H. mandà ny vono olona, saingy tonga niaraka tamin-drà sy ny fitafiana tao amin'ny Vijverdal tao GGZ tao Heerlen. Noho izany dia misy porofo, saingy izany dia amin'ny endrik'i Thijs H. ho an'ny mpitsabo aretin-tsaina ary tsy avela hilaza na inona na inona izy. Ao anatin'ity PsyOp ity dia toa misy fifandimbiasana izay nofinofina izay tsy ahafahan'i Thijs H. ho voavela raha ny mpitsabo sivika dia tsy manapaka ny sekretera matihanina. Izany no tokony hitarika ny PsyOp: ny fanesorana ny sekretera matihanina. Ny trangan'i Thijs H. dia hanampy ihany koa amin'ny fiantohana fa ireo olona izay manao fanandramana misafotofoto dia afaka mihidy amin'ny fijerena tsy misy antony sy tsy misy ny fitsabahan'ny mpitsabo aretin-tsaina Edith Schippers volavolan-dalàna).
Ny raharaha Anne Faber - Michael P. dia tsy maintsy nitarika ny fankatoavana ny lalàna mikasika ny fanamelohana an'i TBS raha tsy misy ny olona ahiana hiara-hiasa amin'ny fanadihadiana ara-pahasalamana. Azo atao koa ny mitarika any amin'ny fandaharana mandritra ny androm-piainana (TBS) ary angamba koa amin'ny famerenana ny zo hampakatra. Ny faniriana ny hanafoanana io zo io dia miafina amin'ny fijoroana ho vavolombelona mampihetsi-po momba ny naman'i Anne Faber (Nathan Fidder). Nilaza ny mpisolovava azy.
Ny tranga Jos Jos Brech dia tsy maintsy nitarika ny fankatoavana ny fampiasana ADN, izay nahazoana an'io ADN io tamin'ny tranga samihafa noho ilay notadiavin'ilay olona voampanga. Raha ny marina, dia ny fampidirana ny zo amin'ny famerenana ny ADN tsy misy famerenana ary ny fampiasana azy tsy misy ifandraisany amin'ny raharaha ara-dalàna. Ankoatr'izay, ny vahoaka dia nentina nankasitraka kokoa ny famoronana ny tahiry nasionaly nasionaly (jereo eto ny fanazavana).
In ilay lahatsoratra voatonona, izay manome fanazavana be dia be momba ny famoronana olona manana endrika lalina, manazava ihany koa aho fa eo an-tanan'ny mpamokatra televiziona ny ANP (ny Biraon'ny Gazety misahana ny haino aman-jery). Miresaka momba ny miliarideran'i John de Mol izahay. Noho izany dia tsy tokony ho gaga fa rehefa mahita sarimihetsika amin'ny fampahalalam-baovao ianao dia ireny fotsiny ireny famokarana sarimihetsika ireny. Izy io dia haingana sy mora ny mamorona amin'ny rindrambaiko sy ny studio. Tsy mahita izany ny mpijery ary mieritreritra ny mijery vaovao marina. Izany no ataonao amin'ny asa tsara ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany, ny mponina dia resy lahatra avy amin'ireo fampahalalam-baovao ireo ihany fa avy any Rosia ihany ny vaovao sandoka sy ny tafika troll, ary noho izany dia matoky ny fampahalalam-baovao indray ny tsirairay.
Na izany aza, mety ho tsy nisy akory i Faber Anne, fa ny famokarana lalina lalina.
Lisitry ny rohy loharano: nu.nl, 1limburg.nl
Tags: Anne, deepfake, deepfakes, Faber, Fidder, antso, Michael, Nathan, P., Pan kay, tbs, Väder, namana
30 May 2019 amin'ny 09: 08
Hey John de Mol! Raha miaina ao amin'ny fonja dizitaly iray isika, amin'ny fahafahana mametra ny lalàna, izay tsy ahitan'ny olona tsy misy famindram-po amin'ny gulag ary ny zanakay rehetra dia mpandova, moa va isika afaka manenjika anareo avy any amin'ny trano lehibe misy anareo?
5 June 2019 ao amin'ny 12: 27
Die Gorsse Lüge: manohy mamerina mandainga ary mino izany rehetra izany.
Noho izany, ny dokotera PsyOp dia mamely ny safidy vaovao:
5 June 2019 ao amin'ny 18: 20
Ah, misy zavatra azo atao any Madurodam. Azo atao ny tsy azo atao, azo atao ny tsy azo atao.
Miankina amin'ireo dokotera mpitsabo, ary mitarika fotsiny ...
Olona mahatsiravina izy ireo.
« Davina Michelle mpandika teny manaraka ao amin'ny Eurovision Song Contest? Duncan Laurence mahita ny kandidà!
Ny fampisehoana mahafinaritra an'i Marco Borsato ao amin'ny Kuip any Rotterdam! »
Total visits: 16.168.812
Tranga 201 otrikaretina corona fanatanjahan-tena 6 herinandro alohan'ny fipoahan'ny Wuhan, dia mitovitovy toe-javatra mitovy
Canada: Dr. Shinoa Dr. Xiangguo Qiu sy Wuhan virus virus ady ara-biolojika mba hahatonga an'i Shina miankina amin'i Shina ho vahaolana
Fakafakao op Tranga 201 otrikaretina corona fanatanjahan-tena 6 herinandro alohan'ny fipoahan'ny Wuhan, dia mitovitovy toe-javatra mitovy
Zonnetje op Tranga 201 otrikaretina corona fanatanjahan-tena 6 herinandro alohan'ny fipoahan'ny Wuhan, dia mitovitovy toe-javatra mitovy
Zandi Eyes op Tranga 201 otrikaretina corona fanatanjahan-tena 6 herinandro alohan'ny fipoahan'ny Wuhan, dia mitovitovy toe-javatra mitovy
Riffian op Canada: Dr. Shinoa Dr. Xiangguo Qiu sy Wuhan virus virus ady ara-biolojika mba hahatonga an'i Shina miankina amin'i Shina ho vahaolana
leapfrog op Ny Libya dia manome fanazavana momba hoe iza avy ireo firenena any Eoropa no ho voalohany entin'i Turkey